Njikọ ụwa niile - onye nrụpụta ike na Singapore pte ltd
Njikọ ụwa ọnụ
Onye na -emepụta Singapore nke nkwonkwo Universal, Ọkachamara na: Njikọ ụwa, njikọta Universal nke Singapore, na -ejikọ njikọta Universal, otu njikọta Universal, okpukpu abụọ nke Universal.
Category: Nkwonkwo Universalwa nile
Nkenke Universal nkwonkwo
acc. ruo DIN 808
Ngwa maka draịva niile n'igwe injinịa
Single nkenke nkwonkwo
Ugboro abụọ nkenke nkwonkwo
Chepụta ya na larịị amị ma ọ bụ agịga amị
Nkenke Universal nkwonkwo G
Type G: Single nkenke nkwonkwo
Ebube a kwadebere ka ọ pụta ìhè
Max. ọsọ 1000 [1 / min]
Max. diffraction n'akuku 45 Celsius> Dị na
- Imecha mụụrụ H7, na-arịọ na keyway keyway
- Hexagonal mụụrụ ya
- Square mụụrụ
Nkenke Universal nkwonkwo GD
Pịnye GD: Njikọ nkwekọrịta abụọ
Max. diffraction n'akuku 45 Celsius ọ bụla na nkwonkwo
Nkenke Universal nkwonkwo H
Type H: Single nkenke nkwonkwo
Mmezi-n'efu n'ihi agịga amị
Max. ọsọ 4000 [1 / min]
Emechaa mụụrụ H7, na-arịọ na keyway
Hexagonal mụụrụ ya
Ogige nwere oghere
Nkenke Universal nkwonkwo HD
Type HD: Ugboro abụọ nkenke nkwonkwo
nkenke Njikọ ụwa ọnụ
DIN 808 gbasaa
Njikọ nke ụzọ dị ukwuu n'etiti njedebe ọdụ
Ọzọkwa dị na ngwa ngwa kpochidoro GR; MAKWE
nkenke Njikọ ụwa ọnụ GA agbatị
Pịnye GA: Ugboro abụọ nkenke nkwonkwo
- Square mụụrụ nkenke Njikọ ụwa ọnụ HA agbatị
Pịnye HA: Nkọwa nkwekọrịta abụọ
na ngwa ngwa kpochidoro
Nkenke Universal nkwonkwo GR
Pịnye GR na mkpọchi ngwa ngwa
Max. diffraction n'akuku 45 Celsius> Ndenye kpochidoro dị na:
- Mmecha mụụrụ H7 na nku keyway dị ka DIN 6885 peeji nke 1
Nkenke Universal nkwonkwo HR
Pịnye Ọrụ Nchịkwa na nkpọchi ngwa ngwa
Max. diffraction n'akuku 45 Celsius> Ndenye kpochidoro dị na
Ike imepụta klaasị ụwa, ndị na -ebubata ihe dị mma, yana usoro nka nka na -enye ohere ka EPT nye ọkwa kachasị, ịdịte aka na ntachi obi. Emebere ma wuo EPT Planetary Reducers maka ngwa azụ azụ dị elu dị elu. Usoro nrụpụta EPT na -enye anyị ohere ịnye ikike ibu ujo dị egwu yana nhọrọ ịrịgo dị iche iche.
Ntughari, ntinye ihe ndi ozo, ogwu oku, ikpochapu, ihe ndi ozo, nkpuchi nke chrome, ihe nkpuchi zinc, odo odo, ntughari ocha, satin, Oji oji wdg.
CNC machining, ntụmadị, mbịne, igwe, mkpọpu ala, egweri, broaching, ịgbado ọkụ na nzukọ
QC & Asambodo
Technicians onwe-elele na mmepụta, ikpeazụ-ego tupu ngwugwu site ọkachamara Quality inspector
Ngwugwu & ebute Oge
Size: Ihe osise
Osisi Case / Akpa na pallet, ma ọ bụ dị ka kwa ahaziri nkọwa.
15-25days n'omume. 30-45days offcial iji
Port: Shanghai / Ningbo n'ọdụ ụgbọ mmiri
Q: Ị na erekwa ụlọ ọrụ ma ọ bụ emeputa?
A: Otu anyị mejupụtara ụlọ ọrụ 3 na ụlọ ọrụ azụmaahịa 2 mba ofesi.
Q: Ị enye samples? ọ bụ free ma ọ bụ mmezi?
A: Ee, anyị nwere ike na-enye ndị sample maka free ụgwọ ma adịghị akwụ ụgwọ na-eri nke ibu.
Q: Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị? Gịnị bụ gị usoro nke ịkwụ ụgwọ?
A: N'ozuzu ya bụ ụbọchị 40-45. Oge nwere ike ịdị iche na-adabere na ngwaahịa na ọkwa nke nhazi. Maka ọkọlọtọ ngwaahịa, ịkwụ ụgwọ bụ: 30% T / T tupu, itule tupu Mbupu.
Q: Gịnị bụ kpọmkwem MOQ ma ọ bụ price maka ngwaahịa gị?
A: Dịka ụlọ ọrụ OEM, anyị nwere ike ịnye ma gbanwee ngwaahịa anyị na ọtụtụ mkpa. Ya mere, MOQ na ọnụahịa nwere ike ịdịgasị iche na nha, ihe onwunwe na nkọwa ndị ọzọ; Dịka ọmụmaatụ, ngwaahịa dị oke ọnụ ma ọ bụ ngwaahịa ọkọlọtọ ga-enwekarị MOQ dị ala. Biko kpọtụrụ anyị na nkọwa niile dị mkpa iji nweta nkwupụta kachasị mma.